4 inodiwa mamiriro ekufunga mukusarudzwa kwemapurasitiki ekudzoka mabhokisi
Imwe, ruvara Nezve ruvara, iro repurasitiki rekudzoka bhokisi mabhokisi epurasitiki akashandurwa neShenzhen Baidesheng Plastics Co, Ltd. akapatsanurwa kuita mashanu eakakosha mavara: tsvuku, yero, bhuruu, girini uye nhema kune vatengi kusarudza kubva. Maviri, saizi padanho repurasitiki rekudzoka bhokisi uye epurasitiki bhokisi saizi, yedu ...
Nei mapeji erudzi zvigadzirwa zvigadzirwa zvinobatsira kambani yako?
PP chemarata pepa ndeimwe yezvinhu zvinogadziriswa zvinogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji, inogona kuve yakasarudzika dhayeti nechero saizi uye chimiro, yakasimba kupfuura bepa rakagadzirwa, rakasimba, zvakare risingapinde mvura uye huremu hwakareruka. 1. Yakareba-nguva mutengo chengetedzo, zvinogona kuita senge hombe kumusoro-kumberi mutengo, kana kudyara ...
Nei iri mhango bhodhi rakanakira nharaunda zvine hushamwari zvinhu panzvimbo yemakadhibhodhi, bhodhi rehuni uye bhodhi?
Nei iri mhango bhodhi rakanakira nharaunda zvine hushamwari zvinhu panzvimbo yemakadhibhodhi, bhodhi rehuni uye bhodhi? Hollow slab, nekudaro zita rinoratidzira, ine mahwendefa maviri akati sandara pamativi ekumusoro uye ezasi, nemidzi yakamira yakatsigira uye ichibatanidza pakati, ichigadzira mhango pakati ...
Zvekuita kana paine kukundikana mukugadzirwa kwepurasitiki mhango bhodhi
Zvekuita kana paine kukundikana mukugadzirwa kwepurasitiki mhango bhodhi Chii chekuita kana paine kukundikana mukugadzirwa kwepurasitiki mhango bhodhi Munhu wese anoziva kuti zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa nemuchina, saka sezvo iwo muchina, pane kusashanda. Uye pese patinosangana nevamwe faul ...
Ongorora nzira dzekuvandudza mhando yehodhi bhodhi kubva kune mashanu maficha
1. Simbisa iyo yemhando yepamusoro yekutarisa kwemhango bhodhi zvigadzirwa. Parizvino, vashoma vane mhango bhodhi vagadziri vane yakakwana yekuongorora michina. Vazhinji havana kuongororwa zvakanyanya mufekitori. Kunyangwe kuwanikwa kwehurefu kushivirira hakuitwe maererano nezvakatemerwa kuongorora kwakasangana ...
Ndeipi chikonzero cheiyo isina kuenzana ruvara rweiyo mhango bhodhi?
Mabhodhi ane mhango parizvino anoshandiswa mumaindasitiri mazhinji, asi shamwari dzinowanzo bhenekerwa kumabhodhi ane mhango dzinofanira kuona kuti mamwe mapuranga ane mhango ane akasiyana mavara, uye anotove nemavara machena. Ndechipi chikonzero cheiyo isina kuenzana ruvara rweakakomberedzwa mabhodhi? Ruvara rwehomba bhodhi ine li ...
Nei uchifanira kushandisa pp hollow sheet, pp correx sheet?
PP mhango jira mapatya-madziro mamiriro epurasitiki bhodhi, chiri chinoshanduka zvinhu zvinogona kushandiswa mumarudzi mazhinji eindustiri, ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvemaindasitiri, inogona kushandiswa zvakanyanya mupaketi, kudhinda, kuvaka, storages, kushambadza zvichingodaro. ...
Zvishandiso zveiyo PP Hollow Sheet / correx sheet
Kushanda KwePP Hollow Sheet / correx sheet PP Hollow Sheet zvakare kutumidza pp correx sheet, pp corrugated sheet uye coroplast sheet, inogona kushandiswa mune ese maindasitiri, inonyanyoshandiswa mune zvemukati / zvekunze signage, zvemagetsi, kurongedza, michina, indasitiri yechiedza, masevhisi epositi, chikafu, pha ...
PP Corrugated Sheet, coroplast sheet - Floor Kudzivirirwa uye Yemukati Masvingo
Pp chemarata chemapurasitiki epurasitiki Dziviriro ndeimwe yezvigadzirwa zvinopihwa nep hollow sheet. Kazhinji, vatengi vanoda iyo 2-4mm gobvu pp chemarata pepa / p isina mhango pepa rekuchengetedza pasi, inogona kuitwa ne roll kana plastiki bhodhi. p mhango jira iri mugadziri wePolypropylene (PP ...
Nei uchifanira kushandisa pp anti-static hollow sheet? Ndeapi makomborero ekushandisa pp anti-static hollow sheet (ESD pp board)?
Static magetsi, sechinhu chakasarudzika chakasarudzika chinoitika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, inotova mamiriro emamiriro ekubhadharisa, kazhinji asingakuvadze kumuviri wedu wemunhu, nekuti muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, hausi kutarisisa zvakanyanya, asi unokosheswa zvakanyanya indasitiri yemagetsi. Electr ...
Ndezvipi hunhu p epurasitiki mhango jira
ne admin pane 21-06-26
Plastiki pp mhango bhodhi inowanzoshandiswa mune ese maindasitiri, kunyanya ekurongedza, kudhinda uye kuvaka. PP mhango bhodhi, PP mhango jira kazhinji vane pazasi hunhu. pp mhango jira, pp chemarata sheet, pp epurasitiki jira 1, mazhinji epurasitiki mhango bhodhi iri light in tire ...
Sei PP mhango bhodhi ine murazvo retardant zvivakwa？
Sei PP mhango bhodhi vane murazvo retardant zvivakwa Iyo murazvo unodzora zvivakwa zve PP mhango bhodhi anonyanya kuwanikwa nekuwedzera masterbatch inonzi murazvo unodzora. Ruzivo rwunoenderana nerwemoto unodzora nderinotevera: 1. Rimi retardant chinhu chinowedzera chinowedzerwa nechinangwa cheku ...